Laasaros iyo ninka hodanka ah, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Laasaros iyo ninkii hodanka ahaa - sheeko caqiido ah
Weligaa miyaad maqashay in kuwa dhimanaya iyagoo gaalo ah aan Ilaah loo heli karin? Waa caqiido naxariis iyo waxyeello leh, taas oo caddeyn u ah hal aayad oo masaal ninkaas hodanka ah iyo Laasaros saboolka ah ay tahay inay u adeegaan. Si kastaba ha noqotee, sida dhammaanba tuducyada Kitaabka Quduuska ah, masaalkan wuxuu ku taagan yahay macno gaar ah oo keliya ayaa loo fahmi karaa oo keliya macnaha guud. Had iyo jeer waa wax xun inaad ku salaysid caqiido hal aayad ah - iyo wixii intaa ka sii badan haddii ay ku jirto sheeko fariinteeda guud ay gabi ahaanba ka duwan tahay. Ciise wuxuu masaalnimada ninkaas hodanka ah iyo masaakiinta ah la wadaagay masaakiinta laba sabab: midda koowaad, in la diido diidmada hoggaamiyeyaasha reer binu Israa'iil inay rumaystaan ​​isaga, tan labaadna, in laga been sheego aaminsanaanta ballaaran ee ah in taajirnimadu ay calaamad u tahay wanaagga Eebbe, halka saboolnimaduna ay caddayn u tahay baahinteeda.
Masaalka ninka hodanka ah iyo masaakiinta ah Laasaros waa ugu dambaysay taxane shantii kale ahaa oo Ciise ku yidhi koox Farrisiin iyo culimmo ah, kuwaas oo hunguri iyo naxariis ka muuqatay sida ay ahaayeen, waxay qaateen himilada ah in Ciise sidoo kale daryeelo dembiilayaasha. oo halkaasay cuneen (Luukos 15,1 iyo 16,14). Intaa ka hor, wuxuu hore u sii sheegay masaalkii adhiga lumay, kii lumay iyo kan lumay. Markuu sidaas samaynayay, Ciise wuxuu rabay inuu u caddeeyo cashuurqaadayaasha iyo dembilayaasha, iyo sidoo kale Farrisiinta iyo cadhada ka careysan ee u maleynayay inaysan lahayn sabab ay ku toobad keenaan, in jannada ku jirta Ilaah ay ku jirto farxad badan dembiilaha oo bilaaba nolol cusub oo aan ka badnayn sagaashan iyo sagaashan. kuwa kale oo aan u baahnayn (Luukos 15,7 Good News Bible). Laakiin taasi maahan.
Maahmaahdii maamulka daacadnimada, Ciise ayaa u timid sheekada afraad (Luukos 16,1-14). Farriintooda ugu weyni waa: Haddii aad jeceshahay lacag sida Farrisiinta, Ilaah ma jecli doontid. Ciise wuxuu si gaar ah ugu jeestay Farrisiintii, oo wuxuu ku yidhi, Adigu naftaada isku caddee dadka hortiisa. Laakiin Ilaah waa garanayaa qalbiyadiinna. waayo, wixii dadka dhexdooda ku sarreeya Ilaah hortiisa waa karaahiyo (V. 15).
Sharciga iyo nebiyadii ayaa marag furaya - sidaas oo ka mid ah ereyadii Ciise - in boqortooyadii Ilaah ay gashay oo qof walba uu ku riixayo dagaal (Aayadaha 16aad). Farriintiisu waa: Maadama aad u qaddarinayso wax aad u qiimo badan oo dadku ay jecel yihiin oo aan ahayn waxa Eebbe jecel yahay, waad diidday wicitaankiisii ​​- oo markaa fursadda - inaad ku hesho jidkiisa boqortooyadiisa xagga Ciise. Muuqaal ahaan, aayadda 18 waxay muujineysaa in hoggaamiyeyaasha Yuhuuddu ka leexdeen sharciga iyo nebiyadii u gudbiyay Ciise sidaasna ay Ilaahay uga noqdeen. (cf. Yeremyaah 3,6). Aayadda 19aad, waxay ku xidhnayd afartii maahmood ee hore, sheekada ninkan hodanka ah iyo Laasaros saboolka ah ayaa bilaabmay, sida Ciise u sheegay.
Sheekada waxaa ku jira seddex jilaa oo waaweyn: ninka hodanka ah (oo u taagan Farrisiinta hunguri-weynaha), miskiinka saboolka ah Laasaros (oo ka tarjumaysa heerka bulshada ee Farrisiintu quudhsadeen) iyo ugu dambayntii Ibraahim .
Sheekadu waxay sheegaysaa dhimashada tuuggu. Laakiin Ciise wuxuu la yaabay dhagaystayaashiisa ereyadan: ... oo waxaa malaa'igaha ku qaaday laabtii Ibraahim (V. 22). Waxay ahayd mid si sax ah uga soo horjeedda waxa Farrisiintu ka filayeen nin sida Laasaros, oo ah in dadka isaga oo kale ah ay yihiin kuwa faqiir ah oo jiran sababta oo ah waxay Ilaah ku eedeeyeen sidaas awgeedna aan ahayn ciqaab ka dib dhimashadooda cadaabta ayaa la filayaa. Laakiin Ciise si fiican ayuu wax u baray. Muuqaalkaaga aragtida ayaa khaldan. Iyagu waxba kama oga boqortooyada aabihiis oo waxaa lagu qaldamay oo keliya marka loo eego xukunka Ilaah ee dawarsada, laakiin sidoo kale xukunkiisa iyaga.
Ka dib Ciise ayaa la yaab leh: Markuu taajirku dhintay oo la aasay, isaga - oo aan ahayn miskiinka - waxaa loo arki lahaa silica cadaabta. Markaasuu kor u eegay oo Ibraahim meel fog ka arkay, oo Laasaros qudhiisuna waa dhiniciisa. Oo wuxuu ku qayliyey oo yidhi, Aabbe Ibraahimow, ii naxariiso oo Laasaros ii soo dir inuu fartiisa caaraddeeda biyo ku tiinbiyo oo carrabkayga ku qabowjiyo, maxaa yeelay xanuun ayaan ku xanuunsanahay olollahan (Aayadaha 23-24).
Ibraahim, si kastaba ha ahaatee, muhiimad ahaan ayuu u sheegay ninkan taajiriinta ah: Adigu noloshaada waad jeceshahay hanti oo dhan, oo wakhti aadan u dhimin dadka sida Laasaros. Laakiin waqti ayaan u hayaa dadka isaga oo kale ah, oo haatan wuu ila jiraa oo waxba ma lihid. - Ka dib waxaa jira aayadda inta badan laga saaro macnaha guud: Waxaa kale oo jira farqi weyn oo u dhexeeya annaga iyo adiga in qof raba inuu halkan ka kaco uusan halkaas ka heli karin oo qofna naga soo gudbi karin halkaas (Luukos 16,26).
Halkan iyo halkaas
Weligaa miyaad la yaaban tahay sababta uu qof doonayo inuu halkan uga guuro halka ugu horeeya? Waa iska cadahay sababta qof looga soo jiidi lahaa halkaas, laakiin rabitaanka inuu qaato wado ka soo horjeedka macno malahan - mise taasi? Ibraahim wuxuu la hadlay nin taajiriinta ah isagoo la hadlaya wiilkiisa; ka dib wuxuu yiri in xitaa kuwa raba inay isaga u yimaadaan aysan sameyn karin sidaas darteed kala qeybsanaanta weyn. Muujinta hoose ee sheekadan ayaa ah in uu jiro runtii qof ka adkaaday qaybtan dembiga aawadiis.
Buundada guud ahaan kala qeybinta
Ilaah wiilkiisii ​​wuu u daayay dembilayaasha oo dhan, mana aha kuwa keliya sida Laasaros, laakiin wuxuu sidoo kale siiyey kuwa kale sida taajirnimada (Yooxanaa 3,16-17). Boqortooyadii lagu xusay masaalkan, oo astaan ​​u ahaa Farrisiinta iyo culimmada oo dhaleeceynaya Ciise, ayaa diiday Wiilka Ilaah. Wuxuu raadinayey wixii had iyo jeer ahaa himilooyinkiisii: raacitaanka shaqsi ahaaneed ee ka qaadida kuwa kale.
Ciise wuxuu ku xiray sheekadan isagoo ka codsanaya nin taajir ah inuu nin uga digo walaalihiisa si aysan u dhicin isla wixii isaga. Laakiin Ibraahim wuxuu ugu jawaabay, Waxay leeyihiin Muuse iyo nebiyada. waa inay maqlaan (V. 29). Ciise wuxuu horay u gudbiyay tan sidoo kale (eeg aayadaha 16-17) in sharciga iyo nebiyadii ay isaga ku markhaati fureen - taas oo ah in isaga iyo walaalihiis aysan aqbalin (eeg Yooxanaa 5,45-47 iyo Luukos 24,44-47).
Maya, Aabbe Ibraahim, nin hodanka ah ayaa ku jawaabay haddii midkood dhinto inuu u tago, way cafiyi doonaan (Luukos 16,30). Wuxuu Ibraahim ku yidhi, Haddaad maqashid Muuse iyo nebiyada, llaahyo iskama noqon doontid haddii qof kuwii dhintay ka soo sara kaco (V. 31).
Wayna rumeysan waayaan: Farrisiintii, culimmadii iyo wadaaddadii sare oo qorshaynayey in Ciise iskutallaabta lagu qodbo ayaa u yimid Bilaatos dhimashadiisa ka dib oo waxay weyddiiyeen waxa been abuurku ka run sheegayo (Matayos 27,62: 66), oo waxay raaceen kuwii caqiidada ku sheegay, silcin jireen oo dileen.
Ciise uma sheegin masaalkan inuu na tuso jannada iyo cadaabta sida ugu macquulsan. Hase yeeshe, wuxuu ka hor yimid hoggaamiyeyaashii diinta ee wakhtigaas ku xidhnaa iimaanka iyo kuwa ka soo horjeeday ee qalbi jabsan iyo kuwa taajirnimada jecel markasta. Si taas loo caddeeyo, wuxuu u adeegsaday sawirrada luqadda Yuhuudda ee caadiga ah inuu matalo aakhiro (Adoo u adeegsaneysa cadaabta u degsan kuwa cibaadalaawayaasha ah iyo kuwa xaqa ah oo ku jira uurka Ibraahim). Masaalkan, uma uusan sheegin macnaha ama saxnaanta calaamadaha Yuhuudda ee ku saabsan aakhiro, laakiin wuxuu si fudud u adeegsaday luqadda sawirka si uu u muujiyo sheekadiisa.
Ujeeddadiisa ugu weyni waxay ahayd xaqiiqdii ma aha inay qanciso rabitaankeena gubashada ee ku saabsan sida ay noqon lahayd jannada iyo cadaabta. Saas ma aha, waa danta uu ka qabo in sirta Ilaahay naloo muujiyo (Rooma 16,25; Efesos 1,9 iwm.), Sirta wakhtiyadii hore (Efesos 3,4: 5): in Ilaah ku jiro isaga, Ciise Masiix, wiilka jidhka ku dhashay ee Aabaha Qaadirka ah, oo uu tan iyo bilowgii la heshiiyey dunida. (2 Korintos 5,19).
Markaa haddii ugu horreyn aan la macaamilno faahfaahinta suuragalka ah ee aakhiro, tani waxay noo horseedi kartaa oo keliya fogaanshaha isla aqoontii u xirneyd ninka taajiriinta ah ee sheekadaas ku jira: waa inaan rumeysanno oo rumeeysanno kuwii ka soo dhintay kuwii dhintay.
Waxaa qoray J. Michael Feazell